लकडाउनको समय कहीँ जानु हुर्दैन । बाहिर त झन जानु नै भएन । त्यसैले जमुना घरमै छिन्, लकडाउनको पालना गर्दै ।
बिहानको समय थियो । करिब ९ बजे जमुनाको मोबाइलको घन्टी बज्यो । यसो मोबाइल हातमा लिएर हेरिन् उनले । ल्याण्डलाइनको नम्बर थियो । कसको होला भनी मनमनै सोच्दै थिइन् उनी । फोन उठाइन् । फोनमा जम्मा केही सेकेन्ड कुराकानी भयो । फोन राखिसकेपछि जमुना एकदम निराश भइन् ।
निराश हुनुको कारण के थियो भन्दा, उनलाई कुनै साथीको वा नातेदारको फोन आएको थिएन । उसले यही वर्ष घर बनाउनको लागि लिएको लोनको लागि सहकारीबाट फोन आएको थियो । लोनको ब्याज तिर्न आउनुस् भनेर सहकारी संस्थाबाट कल आएको रहेछ ।
लकडाउनको समय, आमाबुबासहित पाँंचै जनाको घरको सबै परिवारका सदस्यहरु बेरोजगार । कमाउने एकमात्र थिइन् जमुना । उनी काठमाडौंमा काम गर्थिन् । लकडाउन भएदेखि कहींबाट कुनै आम्दानी छैन । अलिअलि भएको पैसा खाद्यान्न किनेर सकियो । दैनिक गुजारा चलाउनै धौधौ । दैनिक गुजारा चलाउनै कहीँकतैबाट राहत मिले हुन्थ्यो भने आशा ।
खेतमा कमाएर खाउँ भन्नलाई खेत पनि छैन् । भएको एउटा जग्गामा घर बनाउन सुरु गरेको थियो । दशा नै लागे छ नि । बाउबाजेले दिएको सम्पत्ति बेचेर घर बनाउन सुरु गरेको भए एउटा कुरा । त्यही नभएकै कारणले २०७२ सालले भत्काएको घरमा बस्न नै बाध्य थिए । अहिले समयसमयमा धेरै भूकम्पले धक्का दिन थालेपछि आँट गरेकी थिइन् घर बनाउन । हातमा सीप छँदैछ, कमाएर पैसा तिरौंला भनेर सानो एकतल्ले घर बनाउन सुरु मात्र गरेको थियो उनको परिवारले ।
जमुना कल आएदेखि, उनले आफूसँग भएको अलि पैसा लिएर सहकारी पुगिन् । सहकारीबाट पैसा लिएको पनि करिब ६ महिना हुनै लागेछ । सहकारीको नियमअनुसार ६ महिनाको एकचोटि सावाँ पनि तिर्नुपर्ने नियम छ ।
सहकारीकी कर्मचारीले सोधिन् : सावाँ पनि तिर्ने हो ?
जमुना नरम आवाजमा बोलिन् : होइन, व्याज मात्र तिर्न आको ।
कर्मचारी : तपाईँको त साँवा पनि तिर्ने बेला भएछ । पख्नुस् है, म सरलाई सोध्छु । त्यति नै बेला कल गरेर उनले सरलाई सोधिन् । फोनमा के भनियो ? थाहा भएन । अहिलेलाई व्याज मात्र तिरेर जानु न पछि साँवा पनि तिर्न आउनुस् है ।
जमुना नरम तर रिसमा बोलिन् : खै व्याज त अर्कोपालि तिर्न आउन सकिएला जस्तो छैन । साँवाको कुरा गर्नुहुन्छ । अब के गर्ने ? लकडाउन छ । कमाउने म एकजना मात्र । फेरि म काम गर्छु काठमाडौंमा । लकडाउन भएदेखि केही काम छैन । पैसा कहाँबाट आउने खै ? बरु सरहरुसँग कुरा गर्नुपरे गरौंला । मसँग त अहिले पैसा छैन ।
लामो सास फेर्दै : अनि चैतको व्याज त मिनाहा रे हैन ?
कर्मचारी : बैशाखमै तिर्न आएको भए अलि छुट हुन्थ्यो । अहिले तपाई ढिलो तिर्न आउनुभयो । त्यसैले छैन ।
मनमा कैयौं कुरा खेलाउँदै जमुना घर आएपुग्छिन् । उनी आफैसँग प्रश्न गर्छिन्– के लकडाउन मलाई मात्र लागेको हो ? मलाई काम गर्न मन नलागेर लकडाउन भनेर घरमा बसेको हो र ? कि मलाई मात्र कोरोना लाग्छ भनेर म घरमा बसेको छु ? बुझ्नै सकिएन बा !
सहकारीको कर्मचारीले भनेको कुरा फेरि सम्झिन् । बैशाखमा तिर्न आएको भए अलि छुट हुन्थ्यो ।
उनी मन नलागी नलागी ओंठमा मुस्कान ल्याउँदै सोंचिन्, समाचारमा, अनलाइनमा, सामाजिक सञ्जालमा सबैमा घसमै बस्नु सुरक्षित हुनु भनेको देख्छु । बाहिर प्रहरीहरुले माइकिङ गरेर बाहिर ननिस्किनु होला, घरमै बसेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्छन् । अति आवश्यक भएमात्र बाहिर निस्कनुहोला भन्छन् । अस्ति तरकारी किन्न गएको बेलामा त घरमा जे छ त्यही खानु दिनदनै पसल नआउनुस् भन्छन् । सहकारी संस्थाहरु चाहिँ व्याज तिर्न आउनुस् भनेर फोन गर्छन् । कसको कुरा मान्ने अब ? हामी जनताले सरकारको कुरा सुन्ने कि सहकारीको ? तोकिएको समयमा ब्याज तिर्न गएन भने छुट पनि नपाउने रहेछ । कोरोनासोरोना भाँड मे जाए, पहिला व्याज तिर्न जानुपर्ने रहेछ । खान नपाए पनि मर्ने अवस्था भए पनि व्याज चाहिँ समयमा तिर्नु जानुपर्ने रहेछ ।
भन्दाभन्दै लकडाउन भएको पनि २ महिना भइसक्यो । सबै चिज किनेर खानुपर्छ । अलिअलि बचत भएको पैसा घर बनाउनमा खर्च गरियो । अब त बचत त के, लोन मात्र छ । यस्तो अवस्थामा दिनहुँ खाना कसरी जुटाउने भन्ने भएको बेलामा व्याज तिर्नुपर्ने भएको छ । तिर्न मन छैन भनेको होइन । यस्तो अवस्थामा त समस्या बुझिदिनुपर्छ नि सहकारी संस्थाहरुले । देशमा पूरै कामकाजहरु थप्प भएको बेलामा उनीहरुको काम रोकिएको छैन भन्दैमा सदस्यहरुलाई दुःख दिनु त भएन नि ।
सबैले भन्ने बेलामा चाहिँ आपतकालीन, समस्या भएको अवस्थामा सबैले सबैको सहयोग गर्नुपर्छ भनिन्छ । यो भाषण र किताबमा मात्र सीमित रहेछ । व्यवहारिक रुपमा त कहाँ हुने रहेछ यस्तो ? दुःखको बेला झन दुःख दिने काम मात्र गर्ने रहेछ । यो तीतो सत्य हो ।
आफ्नो कुरा गर्दागर्दैै मलाई भारतले हाम्रो सिमाना मिचेको कुरा याद आयो । कोरोना फैलिएर दुःख, अर्को भारतले हाम्रो देश मिचिदिएर दुःख ।
यो परिस्थितिमा आफूले आफैलाई म आफू चाहिँ नेपाल देश सम्झे । भारत चाहिँ सहकारी संस्था र मचाहिँ नेपाल देश जस्तो लाग्यो । भन्न मात्र सक्ने गर्न चाहिँं नसक्ने । नेपाली भूमि नेपालको हो मात्रै भन्नसक्ने तर फिर्ता लिन नसक्ने ।
जुन पनि समस्या हुने खानेलाई नभई हुँंदा खाने गरिबलाई मात्रै हुने रहेछ । कोरोना पनि हामी जस्तो गरिबलाई श्राप नै रहेछ । राहत देऊ भनौं भने फुटपाटमा बस्नु परेको छैन । आर्थिक सहयोग मागौं भने के भनेर माग्ने ? धितो राख्ने केही छैन ।
यस्तो विपतको बेलामा पनि सहकारी संस्थालाई पनि यसरी नदेखिने पाराले दुःख दिएपछि के गरोस् त । यस्तै लकडाउन भइराख्यो भने त लोनको व्याज तिर्न त के एक छाक खान पनि धौ धौ हुनेछ । यस्तो अवस्था रह्यो भने देशमा कोरोनाले होइन, भोकभोकै खान नपाएर मर्नेको संख्या बढी हुनेछ ।
के भयो चौरजहारीमा ? घटनापछिका कुप्रचार र सामाजिक सद्भावको प्रश्न
कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण : सीमा विवादको समाधान– २
जेठ १६, २०७७ शुक्रबार सूर्य थापा